ओमिक्रोनलाई कमजोर नआँक्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी
काठमाण्डाै – विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टलाई कमजोर नआँक्न सचेत गराएको छ । सङक्रमण विश्वभरि फैलिएको र मानिसले ज्यान गुमाउन थालेका भन्दै डब्ल्यूएचओले ओमिक्रोनलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिएको हो । पछिल्ला अध्ययनले ओमिक्रोन कोरोनाका अरु भेरियन्टभन्दा कमजोर देखाएका थिए । तर डब्ल्यूएचओका प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले ओमिक्रोनका कारण धेरै सङ्ख्यामा मानिस सङ्क्रमित हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली नै दबावमा परेको बताउनुभएको छ । साथै डा. टेड्रोसले गरिब देशमा खोप पुर्‍याउन यसको समुचित ...
माओवादी कमजोर भए जनताका अधिकार खोसिन्छन्: प्रचण्ड
चितवन– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी कमजोर भए जनताका अधिकार खोसिने जिकिर गरेका छन्। चितवनको दिव्यनगरमा शनिबार कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले जनताका अधिकार जोगाउनका लागि माओवादी बलियो हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘माओवादी कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ, जनताका अधिकार खोसिन्छन् । माओवादी बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ, जनताले पाएका […]
एमाले महाधिवेशनमा देखियो कमजोर व्यवस्थापन
चितवन, मंसिर १० । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनमा कार्यक्रताका लागि कमजोर व्यवस्थापन देखिएको छ । नेताका लागि भव्य मञ्चको व्यवस्था भएपनि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कार्यकर्ताका लागि भने व्यवस्थापनको चासो नदेखिएको पाइएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागि हुन आएका कार्यक्रताले भाषण पनि सुन्न नपाई फर्कनुपरेको गुनासो गरेका छन् । महाधिवेशनमा पाँच लाख नेता […]
‘विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भए राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कमजोर हुन्छ’
२९ भदौ, काठमाडौं । सत्तारूढ माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले राष्ट्रियताको रक्षार्थ विद्यार्थी आन्दोलनले वर्दी विनाको सेनाको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बस्नेतले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भए राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कमजोर हुने बताए । मंगलबार अखिल (क्रान्तिकारी) को २२ औं रुपन्देही जिल्ला सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दैन बस्नेतले भने, ‘कतिपय मानिसहरुले विद्यार्थी […]
कमजोर बन्यो मनसुन
अबको केही दिन मनसुन कमजोर हुने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठले आंशिक बदलीको अवस्था देशका विभिन्न स्थानमा कायमै रहने जानकारी दिए । उनले मौसमी प्रणालीमा थोरै सुधार आएकाले पनि मनसुन हालका लागि कमजोर बनेको बताए । सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका केही भेगका मध्यम वर्षा कायमै रहेको छ। अन्य प्रदेशमा कहिले बदली र कहिले घाम देखिने क्रमसँगै कतै कतै हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ । ...
विगत केही दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुन कमजोर भई मौसममा सुधार भएको छ । नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतिर सरेकाले मनसुन आज केही कमजोर भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका मौसमविद् सविना शाक्यले अनुसार अब केही दिन मनसुन कमजोर रहने भएकाले निरन्तरको भारी वर्षाको सम्भावना छैन । “बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका बिहानपख मौसम सफा हुने तथा मध्याह्नतिर बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ,” उनले भनिन्
विगत केही दिन यतादेखि सक्रिय रहेको मनसुन क्रमशः कमजोर हुँदै जाने भएको छ । पूर्वी तराईको भूभाग नजिक रहेको मनसुनको न्यून चापीय रेखा आजदेखि नेपालबाट बाहिरिने क्रम सुरुआत भएकासँगै मनसुन विस्तारै कमजोर हुँदै जाने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिए ।हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । दिउँसो देशको अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादे
केही दिनदेखि सक्रिय मनसुन तत्काल कमजोर नहुने मौसमविद्ले बताएका छन् । यस वर्ष शुरुमै मनसुन सक्रिय भएर भित्रिएकाले तत्काल कमजोर हुने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिए । “यस वर्ष मनसुन सक्रिय भएर भित्रिएकाले यो वायुको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने देखिन्छ”, मौसमविद् कँडेलले रासससँग भने, “त्यसैले केही दिन वर्षाको सिलसिला निरन्तर जारी रहन सक्छ ।” केही दिनपछि भने यो वायुको प्रभाव निस्तेज हुने उनको भनाइ छ । मनसुन शुरु हुने औस
काठमाडौं। केही दिनदेखि सक्रिय मनसुन तत्काल कमजोर नहुने मौसमविद्ले बताएका छन्। यसवर्ष सुरुमै मनसुन सक्रिय भएर भित्रिएकाले तत्काल कमजोर हुने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिए। " वायुको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने देखिन्छ। त्यसैले केही दिन वर्षाको सिलसिला निरन्तर जारी रहन सक्छ," मौसमविद् कँडेलले बताए।रासस
१ माघ, विराटनगर । नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले प्रदेश सरकारलाई थप कमजोर बनाउनुपर्ने बताएका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये केन्द्र र स्थानीय तह प्रभावकारी भएपनि प्रदेश कमजोर देखिएको भन्दै उनले अब यसलाई थप कमजोर बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । विराटनगरमा बिहीबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई […]